Waxyaabaha Ugu Saraysa ee Ka Qayb Qaadashada Ogeysiiska Riixista ee Wax Ku-oolka ah ee Mobile-ka | Martech Zone
Way dhammaadeen waqtiyadii ay soosaarayeen waxyaalo waaweyn ay ku filnaayeen. Kooxaha tifaftirka hadda waa inay ka fekeraan waxtarkooda qaybinta, iyo ka-qaybgalka dhagaystayaasha ayaa cinwaanno ka dhigaya.
Sidee barnaamij warbaahineed u heli karaa (oo u hayn karaa) adeegsadayaashiisa? Sidee tahay aad cabbiraadaha isbarbar dhiga celceliska warshadaha? Pushwoosh wuxuu falanqeeyay ololeyaal ogeysiis riix ah oo ka kooban 104 warbaahin firfircoon wuxuuna diyaar u yahay inuu ku siiyo jawaabo.
Maxay Yihiin Barnaamijyada Warbaahinta Aad Ugu Hawl Gala?
Laga soo bilaabo wixii aan ku aragnay Pushwoosh, cabbiraadaha ogeysiinta riixista ayaa wax badan ka geysta guusha barnaamijka warbaahinta ee ku lug lahaanshaha isticmaalaha. Dhawaan riix ogeysiiska bartilmaameedka cilmi baarista ayaa shaaca ka qaaday:
Celceliska heerka-riix (CTR) barnaamijyada warbaahinta waa 4.43% on macruufka iyo 5.08% on Android
Celceliska heerka opt-in waa 43.89% on macruufka iyo 70.91% on Android
Celceliska inta jeer ee fariimaha riix waa 3 riix maalin kasta.
Waxaan sidoo kale sheegnay in, ugu badnaan, barnaamijyada warbaahinta ay awood u leeyihiin inay helaan:
12.5X ka sareeya qiimaha-guji-marayo on macruufka iyo 13.5X CTR sare on Android,
1.7X ka sareeya heerka opt-in on macruufka iyo 1.25X ka gaabsadeen-in sare heerka on Android.
Waxa xiiso leh, Chine warbaahinta la tubta hawlgelinta user ugu sareeya leeyihiin inta jeer ee isku wargelin riix: waxay soo diri 3 riixo maalin kasta, sida celceliska.
8 Arrimood Oo Saameyn Ku Leh Ka Qeybgalka Macaamiisha Barnaamijka Moobilka
Sidee barnaamijyada hoggaamineed ee warbaahinta ugu guuleystaan ​​inay ka qayb galaan akhristayaashooda in si wax ku ool ah? Waa kuwan farsamooyinka iyo mabaadi'da ay daraasadda Pushwoosh xaqiijisay.
Cunsurka 1aad: Xawaaraha Wararka Lagu Gudbinayo Ogeysiisyada Riix
Waxaad dooneysaa inaad noqoto qofka ugu horeeya ee jabiya warka - tani macno buuxa ayey sameyneysaa, laakiin sidee ku xaqiijin kartaa?
Adeegso xawaaraha sare riix wargelinta tiknoolajiyada lagu gaarsiinayo digniinta wararka 100X ka dhakhso badan celceliska
Laga soo bilaabo waayo-aragnimadeena, marka barnaamijyada warbaahinta ay xawaareynayaan gudbintooda riixitaanka, iyaga CTR-gu wuxuu gaari karaa 12%. Tani waa ugu yaraan laba jeer celceliska aan shaaca ka qaadnay daraasaddeenna xogta.
Toosinta habka tifaftirka dirista ogeysiisyada riixista
hubinaa in kor u qaadida content via riixo waa deg deg ah oo fudud oo qof kooxda barnaamijkaaga warbaahinta. Xullo softiweerka ogeysiiska riixista ee u oggolaanaya qaybinta wararka iyo longreads daqiiqad gudahood - adigoon ogeyn sida loo codeeyo. Sannad gudihiis, waxay kuu badbaadin kartaa toddobo maalmood oo shaqo oo buuxa!
Cunsurka 2: Xulashada Gawaarida Gaarka ah ee Ogeysiisyada Riixista
Halkan waa Dhagar fudud: weydii dhagaystayaasha mowduucyada waxay jeclaan lahaayeen in la ogeysiiyo halka ay ka weydiin lahaayeen inay doonayaan inay helaan iyo in kale wax kasta oo farriimaha dhammaan.
Goobta, tani waxay xaqiijin doontaa sicirka ka-doorbid sare ee abkaaga. Marka xigta, tan ayaa u oggolaan doonta kala-soocidda gunta iyo bar-tilmaameedka saxda ah. Uma baahnid inaad isweydiiso haddii waxyaabaha aad kor u qaadeyso ay khuseeyaan - akhristayaasha waxay heli doonaan oo keliya waxyaabaha ay ku tabaruceen inay helaan! Natiija ahaan, kaqeybgalkaaga iyo qiyaasta sii-haynta ayaa kori doona.
Hoos waxaa ku yaal laba tusaale oo caadi ah oo rukumasho deg deg ah oo lagu muujiyey barnaamijka CNN Breaking US & World News (bidix) iyo barnaamijka USA Today (midigta).
Ka taxaddar, in kastoo: intaad rabto inaad koro si fiican u qaybsan salka of doortay-in dadka isticmaala, waxaa laga yaabaa in aad rabin in la ballaariyo liiska aad macaamiishu wargelinta riix si walba.
Daraasadda xogta Pushwoosh waxay muujisay in sicir-dhimista sare aysan damaanad u ahayn ka-qaybgalka adeegsadaha sare ee isgaarsiintaada.
qaadato The? Qaybinta waa furaha, si aynu deggan on.
Cunsurka 3: Ogeysiiska Riix Qaybta Isticmaalaha
Si loo kordhiyo kaqeybgalayaasha dhagaystayaashooda, barnaamijyada warbaahinta hormuudka u ah waxay bartilmaameedsadaan ogeysiisyadooda iyadoo loo eegayo astaamaha isticmaalaha (da'da, waddanka), doorbidyada rukunka, isticmaalka waxyaabaha la soo dhaafay, iyo dhaqanka waqtiga dhabta ah.
Khibradeenna, tani waa sida daabacayaasha qaarkood ay u kobciyeen CTRs 40% iyo xitaa 50%.
Cunsurka 4aad: Shakhsiyeynta Ogeysiiska Riix ee Riix
Kala soociddu way caawisaa aad garo danaha akhriskaaga. Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed, inta ka horaysa, way ku caawinaysaa dhagaystayaashaada la aqoonsado aad app warbaahinta ka mid ah dadka kale oo dhan.
Habee element kasta oo farriimaha riix si aad app warbaahinta ayaa si aad dareentay - ka horyaalka dhawaaqa in muujinaysaa aad gaarsiinta fariinta.
Walxaha ogeysiiska riixitaanka ee la shakhsiyeeyo karo
Kudar taabasho shucuur leh emojis (markay khuseyso) oo shaqsi ahaan u samee dalabyada rukunka adoo ku bilaabaya magaca isticmaalaha. Waxyaabaha firfircoon ee noocan oo kale ah, ogeysiisyadaada riixitaanku waxay ku heli karaan kobcin 15-40% CTRs.
Tusaalooyinka riixitaanka shakhsi ahaaneed ee barnaamijyada warbaahinta ay diri karaan
Cunsurka 5aad: Waqtiga Ogeysiiska Riix
Marka loo eego tirakoobka aan ku soo ururinay Pushwoosh, CTR-yada ugu sareeya waxay dhacaan Talaadada, inta udhaxeysa 6 iyo 8 fiidnimo waqtiga deegaanka. Dhibaatadu waxay tahay, waa wax aan macquul aheyn barnaamijyada warbaahinta inay jadwalaan dhamaan ogeysiisyadooda waqtigan saxda ah. Marar badan, tifaftireyaashu horay uma qorsheyn karaan digniintooda riixitaanka ahba - waa inay gudbiyaan wararka marka ay dhacaan.
Maxay barnaamij kasta oo warbaahineed sameyn kartaa, in kastoo, ay tahay in la ogaado waqtiga ay adeegsadayaasheedu yihiin kuwa ugu nugul inay gujiyaan ogeysiisyada iskuna dayaan inay gudbiyaan fikradaha iyo akhrinta dheer markaa. Tilmaamo kooban oo lagu guuleysto:
Tixgeli aagagga akhristayaashaada
U deji saacado aamusnaan ah si waafaqsan
Jadwalka waqtiga imtixaanka A / B iyo qaababka la keenay
Weydiiso dhagaystayaashaada si toos ah - sida barnaamijka SmartNews ee ku soo dhaweynaya isticmaaleyaasha cusub rukumad degdeg ah oo weydiinaya goorta ay doorbidaan inay helaan riixitaanno
Tani waa sida barnaamijka warbaahinta uu ugu xallin karo dhibaatada ogeysiisyo aan munaasib ahayn oo aan la jarin, yareyn ka-bixidda iyo kordhinta hawlgelinta isticmaalaha.
Cunsurka 6aad: Soo Celinta Ogeysiiska Riix
Inbadan oo riixitaan ah oo uu soo diro barnaamijka warbaahinta, CTR-yada hoose ee ay helayaan - iyo taa beddelkeeda: ma aaminsan tahay in bayaankani run yahay?
Daraasadda xogta Pushwoosh waxay muujisay in inta jeer ee ogeysiiska riixista iyo CTR aysan midba midka kale ku tiirsaneyn - halkii, waxaa jira xiriir is bedbeddelaya oo u dhexeeya labada mitir.
Khiyaanadu waxay tahay, kuwani waa kuwa daabacan oo yar si ay u diraan ugu yaraan riixitaan maalintii - xaalado badan, ma heli karaan CTRs sare maxaa yeelay ma aysan helin faham ku filan oo ku saabsan dookhooda dhagaystayaasha. Daabacayaasha waaweyn, liddi ku ah, waxay inta badan soo diraan qiyaastii 30 ogeysiis maalintii - haddana, waxay ahaanayaan kuwo ku habboon oo ku mashquulsan.
Sida muuqata, arrimaha soo noqnoqda, laakiin waa inaad tijaabisaa si aad u go'aamiso tirada maalinlaha ah ee ku habboon riixista aad barnaamijka warbaahinta.
Xaqiiqda 7aad: iOS iyo Platform-ka Android
Miyaad ogaatay sida CTRs ay caadi ahaan uga sarreeyaan Android marka loo eego macruufka? Tani waxay badanaa sabab u tahay farqiga u dhexeeya dhufto ee 'UX.
On Android, riixitaanku si muuqata ayuu u arki karaa isticmaalaha: waxay ku dhegan yihiin shaashadda dusheeda, oo isticmaaluhu wuu arkayaa mar kasta oo ay hoos u dhigaan khaanadda ogeysiiska.
On riixitaanka macruufka ayaa kaliya laga arki karaa shaashadda qufulka - marka qalabka la furo, riixitaanka ayaa ku qarsoon xarunta ogeysiinta. Iyo astaamaha cusub ee xaddidaya ogeysiisyada ku jira macruufka 15, ogeysiisyo badan ayaa ka maqnaan doona diiradda isticmaalayaasha.
Ogsoonow in tirada Akhristayaasha waxaad kula hawlgeli kartaa ogeysiisyada riixitaanka ee iOS iyo Android way ka duwanaan doonaan waddan ilaa dal kale.
Boqortooyada Midowday (UK), boqolkiiba isticmaalayaasha IOS waxay dhaafeen saamiga dadka isticmaala Android kaliya bishii Sebtember 2020, iyo hadda dhagaystayaasha barnaamijyada moobiillada waa isku dhowyihiin.
In Maraykanka, in kastoo, users macruufka tiro milkiilayaasha qalabka Android by deggan 17%.
Tani waxay ka dhigan tahay in tirooyinka saxda ah, barnaamijka warbaahinta laga yaabo inuu helo adeegsadayaal badan oo iOS ah oo ku hawlan Mareykanka marka loo eego Boqortooyada Midowday. Maskaxda ku hay tan markaad is barbar dhigayso jaangooyooyinkaaga hawlgelinta ee dalal kala duwan ama jaangooynta.
Cunsurka 8aad: Qaadashada iyo Iskuxidhka Tweaks
Xogta Pushwoosh waxay muujineysaa in Macaamiisha Ganacsi Ganacsi Ganacsi Ganacsi Ganacsi Ganacsi Ganacsi Ganacsi Ganacsi Gaara (CTR) ay sare u kacdo marka barnaamijyada warbaahintu ay leeyihiin 10-50K ka dibna macaamiisha 100-500K
Marka ugu horeysa, kaqeybgalka isticmaalaha ayaa sii kordhaya markii warbaahintu heshay macaamiishii ugu horeysay ee 50K. Haddii barnaamijka warbaahinta uu sii wado inuu diiradda saaro ballaarinta dhagaystayaasha, CTRs si dabiici ah ayey u dhacaan.
Si kastaba ha noqotee, haddii daabacaha uu mudnaanta ka siiyo kaqeybgalka adeegsadaha helitaanka isticmaalaha, waxay dib uheli karaan CTR-kooda sare. Waqtiga barnaamijka warbaahinta uu soo ururiyo macaamiisha 100K, wuxuu si caadi ah u sameeyay liistada imtixaannada A / B waxayna si fiican u barteen dookha dhagaystayaashooda. Daabacaha ayaa hadda codsan kara kala qaybsanaanta habdhaqanka si loo kordhiyo ku-habboonaanta ogeysiisyada la qaybiyey iyo heerarka ka-hawlgalka.
Waa tee farsamooyinka ogeysiiska riixista ee Akhristayaashaada ku mashquuli doonto?
Waxaad haysaa liis arrimood oo dhiirrigeliyey kaqeybgal adeegsade iyadoo la adeegsanayo ogeysiisyada riixa riixa '104' ee barnaamijyada warbaahinta. Hababkee ayaa kuu caddayn doona sida ugu waxtarka badan adiga? Tijaabooyinka iyo tijaabooyinka A / B ayaa kuu sheegi doona.
Istaraatiijiyaddaada ku saleyso mabaadii'da kala-soocidda iyo shaqsiyeynta. Fiiro gaar ah noocee noocee ah ayey u leedahay akhristayaashaada. Dhamaadka maalinta, aasaaska suxufiga wuxuu ka shaqeeyaa suuq geynta barnaamijka warbaahinta sidoo kale - waa wax walba oo ku saabsan gaarsiinta macluumaad qiimo leh dhagaystayaasha saxda ah iyo ku mashquulintooda.
Pushwoosh waa madal otomaatig suuq-geyn suuq-geyn ah oo u oggolaanaya dirista riix ogaysiisyada (mobilada iyo biraawsarka), farriimaha gudaha, emayllada, iyo isgaarsiinta kicinta dhacdooyinka badan. Iyadoo Pushwoosh, in ka badan 80,000 ganacsiyada adduunka oo dhan ayaa kor u qaaday ka qayb qaadashada macaamiishooda, haynta, iyo qiimaha noloshooda.
Soo hel Demo Pushwoosh ah
Tags: androidfarriimaha gudaha ku jiramacruufkamacruufka vs androidapp mobilehawlgelinta barnaamijka moobilkafarriinta moobaylkaogeysiis riix app mobileriix wargelintariix wargelinta ctrriix isirrada ogeysiiskariix inta jeer ee ogeysiiskasicirka ogeysiiska riixriix hagaajinta ogeysiiskajadwalka ogeysiiska riixriix qeybta ogeysiinta riixriix xawaaraha wargelintariix tirakoobka ogeysiiskariix waqtiga ogeysiiskaPushwoosh